Baolina kitra – «Malagasy Pro League» :: Voafingan’ny Ajesaia tetsy Mahamasina ny AS Adema • AoRaha
Baolina kitra – «Malagasy Pro League» Voafingan’ny Ajesaia tetsy Mahamasina ny AS Adema
Faharesena voalohany ho an’ny ekipan’ny seranam-piaramanidin’i Madagasikara. Niondrika tamin’ny alalan’ny isa 2 noho 1 nanoloana ny Ajesaia, tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny ekipan’ny AS Adema, omaly.
Nanamarika ny andro fahefatra ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara taranja baolina kitra Diviziona Elita na ny “Malagasy Pro League” ity lalao ity. Efa vita tamin’ny alahady lasa teo kosa ireo lalao efatra, raha mbola mihemotra indray ny lalaon’ny Fosa Juniors, tokony hifandonany amin’ny Zanakala FC.
Teo amin’ny fizaràm-po­toana voalohany no efa nitarika tamin’ny isa 1 noho 0 ny ekipan’Antaninkatsaka, tamin’ny alalan’i Ravaka (31’). Teo amin’ny fizaràm-potoana faharoa no nikobana fanindroany ny haraton’ny Adema, raha indray mandeha kosa
ny an’ny Ajesaia.
Tsy isan’ireo niakatra kianja tamin’ity lalao ity i Nina, mpiandry tsatokazo voalohany ho an’ny AS Adema, noho ny ratra nahazo azy tany Fianarantsoa tamin’ny andro fahatelo nihaonana tamin’ny Zanakala FC. Voaantso ho isan’ireo mpilalao nofantenana ho ao amin’ny ekipam-pirenena Malagasy ihany koa izy saingy tsy tafiditra ao ana­tin’ireo telo amby roapolo.
Nametraka ny ekipan’i Bongolava eo amin’ny toe­rana fahefatra izany fandre­sena azon’izy ireo izany. Manana isa mitovy, samy fito, izy ireo sy ny AS Adema saingy manatombo amin’ny lalao iray mbola tsy vita ny Ajesaia. Tafasongona eo alohan’ny ekipan’ny sera­nam-piaramanidina ihany koa ny Cosfa (isa folo) sy ny AS Jet Mada (isa sivy) taorian’ireo lalao nanamarika ny andro fahefatra ireo.
Nahatratra valo ambin’ny folo ny isan’ireo baolina tafi­ditra tamin’ity andro fahefatra ho an’ny “Malagasy Pro League”. Hitohy amin’ny faran’ny herinandro ho avy izao sahady ity fifaninanana ity, ka isan’ireo andrasana ny fanafihan’ny Cnaps Sport,
laharana voalohany vonjimaika, ny 3FB Toliara. Toy izany ihany koa ny fifan­donana eo amin’ny Elgeco Plus sy ny Zanakala FC eny By-Pass ary ny lalao hifanandrinan’ny AS Jet Mada sy ny AS Adema.
Hazakaza-piarakodia :: Manakaiky an’i Faniry ny anaram-boninahitra
Fivorian’ny kaonfederasiona afrikana :: Handalo fanindroany eto Madagasikara ny filohan’ny FIFA